Shiinaha Pieces napa xiirashada galoofyada dhogorta adhiga ah Soo saare iyo Badeecad | Fanshen
Qeybaha napa xiiridda galoofyada maqaarka adhiga
Ka sameysan gabal maqaar adhi ah, Kuwani waa walxaha haraaga ah ee ka hartay dharka maqaarka adhiga, waa mid aad u jaban. Si xarrago leh ayaa loo qaabeeyey loona farsameeyay sidii galoofyada maqaarka oo dhan, oo ku habboon caadi, shaqo, maalin kasta iyo qabowga isticmaalka hawada.
• Qodobka maya: PG-003
• Lambskin jilicsan oo dhab ah
• Cuff waa la duudduubi karaa ama hoos loo dhigi karaa
• Midab: midabbo isku dhafan
• Masax nadiif
• Afar cabbir, S / 7 M / 8 laides, L / 9 XL / 10 ragga, cabirka Customized waa la soo dhaweynayaa
Hore: Qeybaha napa xiiridda galoofyada maqaarka adhiga
Xiga: Sharootada / Gabdhaha gacmo gashiga maqaar-gacmeedka napa waxay soo bandhigaan suun
MILDSHEEP oo la aasaasay 2002, Markay ahayd aqoon isweydaarsi gacmeed.Waxaan ku jirnay jarista iyo gacan ku tolidda shaqooyinka ganacsatada caalamiga ah illaa 2012, Waxaan bilownay inaan iska iibino galoofyada kaligeen ee iibsadayaasha caalamiga ah.Hadda, Waxaan leenahay naqshadeena gaarka ah ee xirfadeed, soo saar, iibin iyo kooxda QC, galoofyadayada, kabaha dhallaanka iyo koofiyadaha laga iibiyay Kanada, Jarmalka, UK iyo dalal kale oo badan.Waxaan kaloo ka qeybgalnaa bandhigyo badan oo caalami ah sanad walba, Tusaale ahaan, MIPEL, MIFUR oo ku yaal milano, APLF oo ku taal Hong Kong. Waxaan aqoon u leenahay shuruucda iyo qawaaniinta kala duwan ee ganacsiga caalamiga ah, sidoo kale waxaan aad u naqaanaa habka dhoofinta, haddaba, wixii su'aalo ah, fadlan haka waaban inaad nala soo socodsiiso!
1, Faa'iidada goobta, Shirkaddaydu waxay ku taal Gobolka Hebei, Waxay ubaahantahay saacadaha 3-4 illaa dekedda hawada ee Beijing. Qiyaastii 5-6 saacadood ayaa loo aadayaa dekedda badda ee Tianjin baabuur, Waa mid aad ugu habboon dhoofinta. Hebei Provinc sidoo kale waa saldhig warshadeed oo loogu talagalay soosaarka maqaarka idaha ee Shiinaha.Xarunta caasimada maqaarka ee Xinji iyo magaalada dhogorta leh ee Daying, dhammaantood waxay ku yaalliin Gobolka Hebei.
2. Awood wax soo saar weyn oo Waaritaan Waara. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, Waxaan taageernaa habka loo habeeyay.
3.QC.More in kabadan khibrad sanadeedka dhoofinta, Shirkadeena waxay leedahay nidaam dhameystiran oo QC ah.Qofkeena QC wuxuu hubin doonaa iibsashada alaabada, waxsoosaarka, baakidhida geeddi-socod kasta.Make hubso in heerkayaga cilladaysan uu ka hooseeyo 0.1%
4.Handmade sraftswomen team, Dhammaan galoofyadayada dhogorta adhiga ah waxaa lagu tolay farsamo dhaqameed tolmo tolmo leh. Waana inay ku dhameystirtaa xirfadlayaal xirfadlayaal ah oo leh in kabadan 10 sano oo waayo aragnimo ah, iyo waliba kaliya galoofyada maqaarka ah. koox sidan ah!
1.Goormaan heli karaa qiimaha?
Waxaan badiyaa sheegnaa 24 saac gudahood ka dib marka aan helno baaritaankaaga. Haddii aad si deg deg ah u hesho qiimaha, fadlan na soo wac ama noogu sheeg emailkaaga si aan u tixgelinno mudnaanta baaritaankaaga.
2.Sidee baan ku heli karaa muunad si aan u hubiyo tayadaada?
Xaqiijinta qiimaha ka dib, waxaad u baahan kartaa shaybaarro si loo hubiyo tayadeena. Hadaad ubaahantahay muunad si aad u hubiso qaabka iyo tayada, waxaan kugu siineynaa muunad bilaash ah, ilaa iyo inta aad awoodid xamuulka xawliga ah. Badanaa, Shaybaarradu waxay diyaar u noqon doonaan in la keeno 1 toddobaad gudahood. Isaga oo tijaabada ah ayaa lagugu soo diri doonaa adoo adeegsanaya xawaare sare oo imanaya 3-5 maalmood oo shaqo ah.
3.Waa maxay shuruudahaaga bixinta?
Waxaan aqbalnaa FOB, CIF waqtigan xaadirka ah.
4.Waa maxay ku saabsan waqtiga hogaaminta wax soo saarka ballaaran?
Badanaa, Kadib xaqiijinta amarka, 60-90 maalmood xilli mashquul ah, 30-60 maalmood oo fasax ah. Laakiin, Haddii ay tahay amar yar, Waxay u baahan doontaa 2-3 toddobaad.
Mudanayaal gacmo gashi laba gacmood laga tolay gacmo gashi g ...
Mudanayaal Sheepskin oo aan lahayn fargeeto Mittens leh gacmo ...
Cadad suede lambskin / galoofyada dhogorta adhiga ah ee qoraaga ...
Gacmo gashi gacmeedyo lamino maqaar ah oo heer sare ah ...
Mudanayaal gacmo gashi gacmo gashi oo dhan lagu sameeyey oo b ...
Jilicsan iyo Classical merino maqaar haweenka glo ...